War deg deg ah:Alshabaab oo Caawa weeraray Magaalada Afgooye /Sh/Hoose Khasaarana Gaadhsiiyay | ogaden24
War deg deg ah:Alshabaab oo Caawa weeraray Magaalada Afgooye /Sh/Hoose Khasaarana Gaadhsiiyay
Jan 23, 2017 - Aragtiyood
Wararka naga soo gaadhaya Koonfurta Wadanka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in Ururka Alshabaab Maleeshiyaad ka tirsani ay weerar ku soo qaadeen Caawa Makhribnimadii Magaalada Afgooye oo ka tirsan Goblka Shabeelada Hoose ee Soomaaliya.
Waa weerarkii labaad ee Al-Shabaab ay bishan gudaheeda kusoo qaado magaaladaas ,dhawaan ayay ahayd markii Maamulka Jubbaland uu ku goodiyay in uu Alshabaab ka sifayn doono meelaha uu haraagoodu joogo.
Dadka deegaanka ayaa Warbaahinta gudaha u sheegay in weerar ay soo qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab, kaasi oo ay jebiyeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya balse mar labaad ay Al-Shabaab soo qaadeen weerar gaadmo ah.
Ilaa iyo hada macada khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay Dagaalkaasi dhexmaray Ciidamada Dowlada iyo Alshabaab,wixii faahfaahin ah gadaal ayaad kala socondoontaan hadii alle idmo.
Daawo:Banaanbixi ugu waynaa oo looga soo horjeedo RW Itoobiya Abiy Ahmed oo Ka dhacay Gobolka Ogaden.
Daawo:Banaanbixi ugu waynaa oo looga soo horjeedo RW Itoobiya Abiy Ahmed oo Ka dhacay ...
Daawo:Waxyaabihii ay kawada hadleen Farmaajo,Faysal A Waraabe iyo Cali Khaliif Galaydh
Deg deg Daawo:S/land iyo P/land oo maanta maxaabiis lakala wareegay iyo Goobtii oo Dagaal isu bedeshay Gacana la isu qaaday.
Daawo:S/land iyo P/land oo maanta maxaabiis lakala wareegay iyo Goobtii oo Dagaal isu bedeshay ...
Deg Deg Dhalinyaro Soomaali ah oo lagu xiray dalka Canada
Ciidamada la dagaalanka hubka iyo burcada dalka Canada ayaa xabsiga u taxaabay oo xiray ...
Daawo Raisal Wasaaraha Ethiopia Oo Ciidamo Xoogan U Diray Furinta Dagaalka Ee Somalida Iyo Oromada
Waxaa Gumaad Kasocadaa Dhamaan Xuduuda Ay wadaagaan Qoomiyadaha Soomaalida Iyo Oromada Hadaba Raisal Wasaaraha ...
DAAWO XOG CUSUB Maxay ka Wadahadleen MD Farmaajo Iyo Faysal A Waraabe
Waxaa Shirka Brussles Tagay Faysal Ali Waraabe Oo Ah Gudoomiyaha Xisbi Siyaasadeedka Ucid Ee ...
Daawo Shukri Jaamac Ayaa ku Guuleysatay abaalmarinta hal abuurka gabdhaha da’da yar ee BBCSomali
Waa Tartan Sannad le ah Oo Ay BBC Du Qabato Waxaana Kuguulaysatay Shukri Jaamac ...
Jaaliyada Ogadenya ee Nairobi oo Shirtay & Qalbidhagax oo kaqayb Galay.
Shirkan oo ahaa mid si heer sare ah loo soo Agaasimay ayaa waxaa kasoo ...
War Deg Deg ah:Diyaaradii ugu Horaysay oo Rakaab 456 Ethiopian ah sida oo Asmara u duushay.
Wararka aan ka helayno wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in saaka uu bilowday isu socodkii ...
Deg Deg: Qawmiyada Sidaama oo kilal Gooni ah ku Dhawaaqday.
Wararka nagasoo gaadhaya gumaysiga Itoobiya gaar ahaan gobalka Shucuubta konfured ayaa sheegaya In golaha ...